Madaxweynaha Dowlada KMG ah oo ka tacsiyadeeyay geerida Raiisul wasaarihii Itoobiya – SBC
Madaxweynaha Dowlada KMG ah oo ka tacsiyadeeyay geerida Raiisul wasaarihii Itoobiya
Posted by Webmaster on August 21, 2012 Comments
Shariif Sheeq Axmed Madaxweynihii xilku ka dhamaaday ee Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa kulan saxaafadeed uu ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho Xarunta dalka waxa uu tacsi ka diray geeridii ku timid Raiisul wasaarihii Dalka Itoobiya Males Zanawi.
Madaxweyne Shariif ayaa sheegay in uu kaga tacsiyadeynayo Shacabka reer Itoobiya geerida Raiisul wasaarahoodii.
Waxaa kale oo uu Shariif Sh Axmed uga tacsiyadeeyay dhamaan geeska afriga geerida Meles isagoona sheegay in uu ahaa nin qeyb weyn ka ah siyaasada Geeska africa.
“Waxa uu ahaa Zanawi nin weyn oo aan isla soo marnay marxalado kala duwan waayadii ugu dambeysayna waynu aheyn dad isku meel wax ka arka, waxaana uga tacsiyadeynaynaa shacabka reer itoobiya iyo dhamaan Africa” ayaa ka mid ahaa hadalada Madaxweyne Shariif .
ubax tanaas says:
gaal saaxiibkiis daba dhilif ah weeye kan u tacsiyaynaya hadii aad gaal saaxiib la tahayna adna sidoo kale baad tahay aad baan ugu farax sanahay dhimashada wacalka bakhtiga itoobiya maan sah alaah allahayow cadaabta ku fogeee muxuu muslin islaam laayay